Muqdisho: Dibadbaxyo Looga soo horjeedo Dowladda oo laga cabsi Qabo In ay Dhacaan • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Muqdisho: Dibadbaxyo Looga soo horjeedo Dowladda oo laga cabsi Qabo In ay Dhacaan
April 18, 2019 - By: Mohamed Jeenyo
Waxaa magaalada Muqdisho ka taagan cabsi la xiriirta banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhaca magaaladaasi xili saacidihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen wararka arimahaasi la xiriira.
Jawiga guud ee Muqdisho ayaa saaka ka duwan jawiyadii hore Wadooyinka waa weyn ee caasimadda ayaa lagu arkayaa ciidamo Booliis ah kuwaas oo baaritaano ku sameynayaa gaadiidka iyo dadka shacabka ah ee adeegsanaya wadooyinka.
Wararka ku saabsan in Muqdisho ay ka dhacaan banaanbaxyo ayaa si weyn laysula wadaagayay baraha ay bulshada ku xiriirto iyadoo aysan jirin cid si faahfaahsan uga hadashay banaanbaxyada iyo ujeedka laga leeyahay.
Siyaasiyiinta taageersan dowladda federaalka iyo culimaaa u’diinka Soomaaliyeed ayaa si isku mid ah ugu eedeynaya xubnaha mucaaradka in ay abaabulayaan rabshado iyo banaanbaxyo looga soo horjeeedo madaxda dowladda federaalka.
Dowladda Federaalka ayaa iyadu shalay soo bandhigtay ciidamo Booiis ah oo loo tababaray in ay ka hortagaan banaanbaxyada rabshadaha wata taasoo ififaalo ka bixisay in ay Muqdisho ka dhacaan banaanbaxyadan.